संकटा क्लव खप्तड गोल्ड कपको क्वाटरफाइनलमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
संकटा क्लव खप्तड गोल्ड कपको क्वाटरफाइनलमा
काठमाडौं । गोर्खा ब्वाइज रुपन्देहीलाई २–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सीएमजी क्लब संकटा तेस्रो नेपाल आईस अन्तर्राष्ट्रिय सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरको छ ।
शुक्रबार भएको खेलमा संकटाले पहिलो र दोस्रो दुबै हाफमा एक एक गोल गरेको थियो । संकटले सेमीफाइनलका लागि क्यामरुनको धाउफिन्स एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
धनगढी रंगशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा संकटाकाले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्न सक्यो । उसका लागि जय गुरुङको पासमा रवि सिलवालले पेनाल्टी क्षेत्रबाट विपक्षीको पोस्टमा छिराए ।
खेलको ८३ औं मिनेटमा फोफाना इब्राहिमको लो क्रसमा एलोन म्याक्सवेलले गोल गर्दै संकटाको जित पक्का गरे । खेलमा ब्वाइजले गोल गर्ने निकै मौका पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन ।
विजयी टोलीका प्रशिक्षक सल्यान खड्गीले जित दर्ता गरेपनि मैदानको अवस्थाका कारण प्रदर्शन सोचेअनुरुप हुन नसकेको बताए ।
गोर्खा ब्वाइजका प्रशिक्षक दयाराम श्रेष्ठले पाएको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा हार बेहोरेको बताए ।